ပို့စ်တင်ချိန် - 5/25/2014 07:52:00 AM
1. ဆရာ ကျွန်တော့ မျက်နှာ ပါးနှစ်ဖက်မှာ ဝက်ခြံတွေထွက်နေတာကြာပါပြီ။ ဝက်ခြံဆိုပေမဲ့ ရိုးရိုးဝက်ခြံလိုမျိုး ရောင်တာ မှဲ့တာ နာတာမျိုးတော့မရှိပါဘူး။ ဆားဝက်ခြံလို့ပဲ ခေါ်မယ်ထင်တယ်။ မျက်နှာပေါ်မှာ စမ်းကြည့်ရင် အစေ့လေးတွေလိုမျိုးပဲ။ မှဲ့ပြီးတော့လဲ ရောင်မလာဘူး။ ဒီအတိုင်းပဲ။ ညှစ်လိုက်မှ အဖြူအစံလေးတွေ ထွက်လာပါတယ်။မညှစ်ရင် ဒီအတိုင်းကြီးပဲ ကျန်နေပါတယ်။ မျက်နှာကလဲ ကိုင်လိုက်ရင် အခဲလိုမျိုးကြီးပဲ။ ကျွန်တော်မျက်နှာသစ်ရင် သေချာသစ်ပါတယ်။ လက်နဲ့လဲ မကိုင်ပါဘူး။ Cosmetic တွေသုံးပေမဲ့ အဆင်မပြေပါဘူး။ အဲ့ဒါဘယ်လို ပျောက်အောင်လုပ်ရမလဲ အကြံပေးပါဦးဆရာ။ ပြီးတော့ ဘာလို့ အလိုမျိုး ဖြစ်တာရယ် ရိုးရိုးဝက်ခြံနဲ့ ဘယ်လိုကွာလဲဆိုတာ ရှင်းပြစေလိုပါတယ်။
2. ဆရာ သမီးမျက်မှာ နှာခေါင်းဘေး မျက်လုံးအောက်မှာ ဗျုတ်ကလေးတွေ ရှိနေပါတယ်။ အဖုလေးတွေ အများကြီးပါ။ မနက်အိပ်ယာနိုးချိန်မှာ မသိသာပေမဲ့ နေ့လည်ကစပြီး အရမ်း သိသာပါတယ်။ အဲဒီ အဖုလေးတွေကို ကုလို့ရနိုင်ပါလား။ တချို့ က အဲဒါကို ဆားဝက်ခြံလို့ပြောပြီး၊ တချို့က အဆီဖုလို့ ပြောပါတယ် မျက်နှာအရေပြား ချောချင်ပါတယ်။ ကုလို့ရနိုင်ပါလားဆရာ။ ဖြေကြားပေးပါ။
အလုံး-အကြိတ်-အနာအဆာ တခုခုတွေ့ရင် ပဌမဆုံး ခွဲခြားရမှာက “ကင်ဆာ” လား “ကင်ဆာမဟုတ်တာ” လား ဖြစ်ပါတယ်။ Seborrheic Keratosis ဆားဝက်ခြံက ကင်ဆာ မဟုတ်ပါ။ Acne ဝက်ခြံနဲ့ ဆင်တယ်။ မျက်နှာမှာ အများဆုံး ဖြစ်တယ်။ စုံးမကြီး မျက်နှာမှာ ရုပ်ဆိုးအောင် အဖုအလုံးတွေ လုပ်ပေးထားတာ ဒါမျိုးပါဘဲ။ ဒီအဖုလေးတွေက တခုခု လာကပ်နေသလို ကြည့်တဲ့လူက လက်နဲ့ ဖယ်ထုတ်ချင်စရာ ကောင်းလှတယ်။ အရေပြားရဲ့ အပေါ်ဆုံးလွှာ Epidermis ကနေ ဖြစ်လာတာပါ။ ကြွက်နို့လို အရေပြား အတွင်းထဲ မရောက်ဘူး။ နဲနဲကြမ်းတာနဲ့ မကြမ်းတာမျိုးရှိတယ်။ မကြမ်းရင် အစေ့လေးတွေ လာကပ်နေသလို ဘေးက အရေပြား အကောင်းထက် နဲနဲ အရောင်ရင့်နေမယ်။ မှန်ဘီလူးနဲ့ ကြည့်ရင် ပုလဲလုံးလေးတွေလိုနေတယ်။ တခါတခါ ယားတယ်။ ကြာလာရင်ပေါ့။ ဆွရင်-ဆိတ်ရင် ရဲလာလိမ့်မယ်။ များသွားရင်တော့ သွေးထွက်မှာပေါ့။
ဘာလုပ်ရမလဲ။ ဒီအတိုင်းသာထားပါ။ နဲနဲကြီးလာချင်လာမယ်။ မစိုးရိမ်ပါနဲ့။ လှချင်လို့ ရှင်းချင်ရင် Liquid Nitrogen ဆိုတဲ့အရည်နဲ့ အေးခဲအောင်လုပ်ပေးတယ်။ blister မီးလောင်ဖုလိုမျိုး အရည်ကြည်ဖုလေးတွေ ဖြစ်လာလိမ့်မယ်။ ပြီးမှ နဲနဲကြာမှ အနာကျက်လာမယ်။ အနာဖြစ်ရင် အနာရွတ်ကြီးတတ်သူများ မျက်နှာမှာဆို ဒါမျိုးမလုပ်သင့်ဘူး။ တချို့လူတွေမှာ ဘာအနာဖြစ်ဖြစ် Keloids အနာရွက်သီး ဖြစ်တတ်တယ်။
နောက်တနည်းက ရိတ်ပြစ်တာ။ flexible razor blade သုံးသင့်တယ်။ လက်မလွန်စေနဲ့။ ရိတ်ပြီးရင် Aluminum chloride or Silver nitrate ဆေးလိမ်းပေးပါ။ သွေးမထွက်စေဘူး။ Silver nitrate ကညိုမဲမဲမို့ အစမှာ ညိုနေအုံးမယ်။ နောက်ပျောက်သွားမယ်။ Aluminum chloride ကပိုကောင်းတယ်ပေါ့။
Light electrocautery လျှပ်စစ်နဲ့ လောင်စေတဲ့နည်းလည်း သုံးပါတယ်။
အရေပြားကို မိမိဖါသာဂရုစိုက်ခြင်း Lifestyle and home remedies
• (လက်တစ်-အက်စစ်) ပါတဲ့လိမ်းဆေး၊ တနေ့ ၂ ကြိမ်လိမ်းပါ။